Amasu asebenzisekayo wokuxhumana kwe-Omni-Channel | Martech Zone
Ulahlekelwa kanjani yikhasimende? Nikeza ngesipiliyoni esingahambelani, ungabanaki, ubathumele okunikezwayo okungahlobene? Yonke imibono emihle. Amakhasimende akho azoshintshela kwezinye izinkampani ukuthola usizo olungcono lwamakhasimende, futhi kulezi zinsuku abantu bathembele kubo ukubuyekezwa okuku-inthanethi njengegama elisha lomlomo.
Wenza njani uku Gcina ikhasimende? Futhi hhayi kuphela ukuzigcina, kepha ukhuthaza ukwethembeka kwazo kumkhiqizo wakho? Lapho amakhasimende ezizwa enakekelwa yinkampani yakho, bazochitha okuningi nawe. Umgomo ukunikeza insizakalo yamakhasimende enhle kakhulu futhi engaguquguquki, kuwo wonke amapulatifomu webhizinisi lakho.
Kepha ama-CEO nabaphathi Bezentengiso bayazi ukuthi lokhu kulula ukukusho kunokukwenza. Udinga amathuluzi wokukusiza ukunikela ngohlobo lwensizakalo yamakhasimende engaguquguquki, esezingeni eliphezulu ezoshayela ibhizinisi lakho. Udinga Ukuxhumana kwe-Omni-channel; ithuluzi lesimanje eliqinisekisa umuzwa ongenamthungo kukho konke ukuxhumana kwamakhasimende kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ukwakha Ukwethembeka Kwekhasimende Emhlabeni Wanamuhla We-E-Commerce
Wonke umuntu osomabhizinisi uyaqonda ukuthi ukuphathwa kobudlelwano kuyakhohlisa. Ukuncintisana okunamandla kugcina ingcindezi yokwakha umkhiqizo wakho ukuze amakhasimende aziwe ngawo futhi adonsekele endabeni yakho. Kunamasu amahle wokukusiza wenze lokhu.
Sebenzisa ukuxhumana kwe-Omni-channel ukwenza ingxenye amakhasimende akho futhi wakhe imikhankaso yokukhangisa ehlosiwe ngalezo zingxenye. Zibandakanye amakhasimende akho ngesikhathi esifanele ukuze azizwe ebonwa futhi aziswa yinkampani yakho.
1. Ingxenye Amakhasimende Akho
Ukuhlukanisa amakhasimende akho kwenza kubaluleke kakhulu okuhlangenwe nakho kokuthenga okwenzelwe wena kungenzeka. Uma wenza imikhankaso ethile yokumaketha efanelekile, ungakhuphula i- inani lempilo yamakhasimende futhi wakhe ukwethembeka. Ngokuvamile kunezindlela ezine zokuhlukanisa amakhasimende akho:
Ukubalwa kwabantu (bangobani? Ubulili, iminyaka, imali engenayo)
I-Psychographic (bangobani ngempela? Uhlobo lomuntu, isigaba senhlalo)
Ukuziphatha (amaphethini wokusebenzisa imali, ukwethembeka komkhiqizo)
Nge-automation ye-AI-powered ungahamba njenge-niche njengoba ufuna ngesegmenti yakho, futhi uqoqe imininingwane ebalulekile ngamakhasimende akho nabavakashi besiza.
2. Yenza Ukuxhumana Kwakho kube ngokwakho
Amakhasimende afuna ukwazi ukuthi abalulekile kuwe. Bafuna ukuxhumana komuntu ngamunye, futhi ucwaningo lukhombisa ukuthi bazimisele ukushintshanisa imininingwane yabo eyimfihlo ngalo.
Uma usebenzisa ithuluzi lesimanje ukuqoqa idatha kumaphethini wokuthenga kwamakhasimende nokuziphatha, unganikeza uhlobo lwesipiliyoni esenzelwe wena esizothokozisa amakhasimende akho. Amasu afaka:
Ukunikeza isivumelwano esibucayi sesikhathi ukuguqa lapho izivakashi zizama ukushiya isiza
Ukwenza ngezifiso ukunikezwa kwe-upsell kususelwa ekuziphatheni nasekuthengweni kwekhasimende ngalinye
Kwethulwa imbondela yezinto zenqola ezishiyiwe njengesikhumbuzo kwikhasimende lakho lokuthi ligcine kuphi
Futhi kunezinye eziningi amaqhinga wokwenza ngezifiso. Ukuthuthuka okuqhubekayo kwamathuluzi esoftware wokumaketha kungasiza ibhizinisi lakho ukuthi linikeze izixazululo ezinamandla kakhulu zezidingo zamakhasimende. Ubuchwepheshe be-AI bungakusiza uqonde futhi ubikezele ukuziphatha kokuthenga, wabelane ngemininingwane, futhi ufundise amakhasimende ngomkhiqizo wakho - ngokusebenzayo. Banikeze abakufunayo ngaphambi bayakucela!
3. Khulumisanani ngesikhathi esifanele
Nazi ezinye izindlela ongazisebenzisa ngempumelelo izibhengezo:
Kumenyezelwa…! Gqamisa imininingwane ewusizo (njengokuThunyelwa kwamahhala) ngesikhathi esiyinhloko kunqubo yokuthenga.
Okukhethekile. Intshisekelo yenani lezindaba ze-imeyili zomkhiqizo wakho noma izaziso zohlelo lokusebenza Yenza amakhasimende akho afune ukuba 'Ohlwini'.
Phakamisa Iziteki. Faka ingcindezi yokuthenga ngokubonisa ukuthi ubani omunye obukayo noma othenga into efanayo njengamanje.
Ukunika Amandla Ukukhula Ngezobuchwepheshe
Nge-AI-powered omni-channel software yokuxhumana inkampani yakho ingakha umuzwa omuhle wamakhasimende. Izici ezinjengokubuka kwamakhasimende okukodwa, izimo ezinemininingwane, kanye nezendlalelo zeWebhu (ukunqwabelanisa esizeni) kungakusiza ukukhuphula amasu akho wokumaketha.
Ukubuka Kwamakhasimende Okukodwa
Akunakulandelwa ukugcina ithrekhi yakho konke ukuxhumana kwamakhasimende kuzingxenyekazi ezahlukahlukene ngesandla. Ngokuxhumana kwe-omni-channel, konke ukuxhumana kwamakhasimende akho kuyalandelwa - nge-imeyili, ngocingo, ngemithombo yezokuxhumana, ngisho nasemicimbini yendawo - endaweni eyodwa.
The Ukubuka Kwamakhasimende Okukodwa (noma i-SCV) ibonisa amaphrofayili wedatha yakho yomsebenzisi. Iphrofayela ngayinye iqukethe umsebenzi wesayithi yalelo khasimende, okuncamelayo komkhiqizo, umlando wokuthenga, nokuningi. Ukuba nayo yonke le datha ecebile ngombono owodwa kuvumela ukwahlukaniswa okukhethekile kakhulu nokumaketha okuhlosiwe.
Qiniseka ukuthi i-SCV yakho inikezela ngokuguquguquka, ukukhubazeka, kanye nokuvuselelwa ngesikhathi sangempela, ukuze uhlale unikezela ngomuzwa wamakhasimende ofanele kakhulu nosizayo.
Uma kukhulunywa ngokulawula amasu akho wokumaketha ahlukanisiwe, i-automation iyisihluthulelo. Setha izimbangela zokuxhumana ngokuya ngezimo ezenziwe ngezifiso, futhi uqinisekise ukubandakanyeka okufika ngesikhathi nawo wonke amakhasimende.
Nazi izibonelo ezizenzakalelayo ezimbalwa:
I-imeyili eyamukelekile kuwo wonke umuntu obhalisela uhlu lwama-imeyili
I-webhook ekwazisa ngaso sonke isikhathi lapho othile engena esitolo sakho
Amasu Okusebenza Ajulile
Yonke le mibono nemibono ilungile, kepha ake sijule futhi sihlole izindlela ezingokoqobo zokusebenzisa ukuxhumana kwe-omni-channel. Nazi izindlela ezintathu okufanele zibhekwe:
1. Kahle imeyili Thumela Times
Uma udangele ngemiphumela yakho yokuthengisa ye-imeyili, awuwedwa. Kepha kunendlela yokwandisa imizamo yakho lapha ukuqinisekisa ukuthi wenza konke ongakwenza.
Isu: Hlela i-imeyili ebangela ukuqondana nomcimbi othile, njengokulethwa kwesaziso esithile se-push. I-algorithm izothumela ngokuzenzakalela lawa ma-imeyili ngesikhathi esifanele, ibuyise amanani angcono e-imeyili avulekile futhi ihlanganyele namakhasimende afanele.
2. Vuselela Izinqola Ezilahliwe
Ngo-2016, iBusiness Insider ilinganisela lokho I-2.75 trillion Ezinqoleni zokuthenga ezilahliwe kungatholakala. Ngabe inkampani yakho ingahlomula ngocezu lwalokho?
Isu: Khumbuza amakhasimende akho ukuthi ashiye ini nge-imeyili, abekelwe isikhathi esingangehora ngemuva kokuxhumana kwabo kokugcina. Faka uhlu lwezinto ezisenqoleni yabo kanye nokubizelwa esenzweni. Leli isu eliyinkimbinkimbi ukusetha kepha kufanele imiphumela eqinile, elinganisekayo.
3. I-ROPO: Ucwaningo Ku-inthanethi, Thenga Okungaxhunyiwe ku-inthanethi
Ngemakethe ye-e-commerce echumayo kungaba nzima ukukukholelwa lokho Ukuthengiswa kwe-US okungu-90% zisenzeka mathupha. Izinkampani ezinezitolo zesitolo kubalulekile ukuxhuma imihlaba yabo eku-inthanethi kanye nezitini nodaka ukuze kugcinwe futhi kusetshenziswe imininingwane yamakhasimende.
Isu: Qalisa uhlelo lwekhadi lokuthembeka amakhasimende angalisebenzisa ezitolo ezixhumanisa iphrofayili nedatha yabo eku-inthanethi. Manje usungahlanganisa ukusebenza kwabo ku-inthanethi nomlando wokuthenga ongaxhunyiwe kwi-inthanethi. Thola iphrofayili ephelele yamakhasimende, uwafake emikhankasweni yakho yokukhangisa ehlosiwe, ucebise ulwazi lwabo ngokunikezwa okukhethekile, futhi ukhuthaze ukwethembeka kwamakhasimende okubaluleke kakhulu.
Kubalulekile ukuthi noma yiliphi ibhizinisi lihlale lifanelekile, futhi amathuluzi esoftware okugcina inkampani yakho ihamba phambili ijika linikwe amandla yi-AI. Ukuxhumana kwesiteshi se-Omni kukunikeza amandla wokwehlisa amakhasimende akho ngokwenza ngezifiso, ukuzenzakalela nokumaketha okuhlosiwe. Vumela le ndlela inyuse inani labo lempilo kanye nelakho.
Tags: inqola yokuthenga elahliweukulahlwa kwenqolaukwethembeka kwamakhasimendethumela izikhathi ze-imeyiliI-Exponeageographyukuhambisana nesikhathi komlayezoomnichannelokuhlangenwe nakho kokuthenga okwenzelwe wenascvukubuka kwamakhasimende okukodwaisu